Izinzuzo Zekhamera Yomzimba Worn Ezibhedlela | Izixazululo ze-OMG
Izinzuzo ze-body-Worn Camera ezibhedlela
Ukusetshenziswa Kwekhamera Yomzimba-Worn Ezakhiweni Zokunakekelwa Kwezempilo
Isayensi nezobuchwepheshe kusibekele umhlaba ngokuphelele eminyakeni embalwa edlule. Sibona izinto eziningi ezintsha ezikhiqizwa nsuku zonke ukuze zikhululeke futhi sizisekele. Wonke umuntu uzungezwe yilezi zinto zobuchwepheshe. Ezokuphepha nokubhekwa bekuyinselelo enkulu manje ngosuku. Sibone inani elikhulu lezixazululo zezinkinga zokuphepha. Enye yezinto ezisetshenziswa kahle kakhulu ezisetshenziswayo namuhla i-Body Worn Camera.
Ama-body Worn Camera ngamakhamera akhethekile anikezela ukusekela nokusekelayo kumuntu okusebenzisayo. Inamathiselwe emzimbeni womsebenzisi futhi iqopha izinto ezibonwe ngumsebenzisi. Amakhamera agqokwa ngomzimba acosha izitayela eziphezulu manje ngosuku. Njengoba bebelokhu bephumelela kakhulu futhi bezuzisa.
Amakhamera agqokwa ngomzimba empeleni enziwa ukuthi asetshenziswe ngumnyango wamaphoyisa ukusiza amaphoyisa ekuphenyiseni, ekuphenyiseni imibuzo nasekubhekisiseni lokho. Kepha manje, sebeqalile ukusetshenziswa nakwamanye amasimu. Isibonelo esihle kakhulu sokusetshenziswa kwabo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo.
Ukusetshenziswa kwekhamera okugqokwa ngumzimba ezindaweni zokunakekelwa kwempilo:
Izikhungo zokunakekelwa kwempilo seziqale ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngezinhloso eziningi. Lo mkhuba uqalwe iminyaka embalwa. Kakhulu, kusetshenziswa amakhamera agqokwa ngomzimba ukubhekisisa nokuqopha ekungeneni kwalezi zikhungo. Ngaphandle kwale nhloso, la makhamera anezinye izinhlelo eziningi zokusebenzisa. Ukusetshenziswa okubalulekile kwalawa makhamera ukuqapha indlela yokuziphatha kweziguli ezikhubazeke ngengqondo. Amakhamera agqokwa ngomzimba nawo anciphise isimilo esenziwe ngabasebenzi besikhungo sokunakekela ezempilo ezigulini nasezisebenzini. Lokhu kuholele ekwehlekeni okukhulu kwezigameko zodlame ezibhedlela nasemitholampilo. Amakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziswa futhi kubahlengikazi ukuhlola amakhono abo nokubonisa amaphutha abo. Sekukonke, singaba nezicelo eziningi zamakhamera agqokwa ngumzimba kepha, ngokubona kwethu, akumele asetshenziswe ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo njengoba kuphazamisa ubumfihlo babasebenzi basesibhedlela kanye neziguli nabasondelene nabo. Ake sibheke kabanzi lezi zici bese uthola umphumela omuhle.
Ake sibheke okunye kokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba ezindaweni zokunakekelwa kwempilo.
Ezokuphepha zingenye zezinselelo ezinzima abantu okufanele babhekane nazo manje ngosuku. Ngakho-ke, basebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamagajethi wokuphepha ngale njongo. Njengoba sikhuluma ngamakhamera agqokwa ngomzimba, ake sibheke ukusebenza kwawo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo. Izikhungo zokunakekelwa kwempilo seziqale ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngenhloso yokuphepha nokubhekisisa ukubhekwa kwazo. Imvamisa, la makhamera anamathiselwe izidumbu zonogada abame emnyango wezicabha ezinkulu. Kufanele ucabange ukuthi kungani bengazange basebenzise amakhamera we-CCTV ngale njongo. Kepha uma sibona, ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba kufeza izinjongo ezimbili futhi kunenqwaba yezinzuzo.
Ekuqaleni, amakhamera agqokwa ngomzimba anganikeza ukubhekwa okuphelele nokuqoshwa komuntu ngamunye odlula ekungeneni. Inekona elikhudlwana ngenxa yokuhamba kwayo kwamahhala. Ngakho-ke, ingakwazi ukufaka indawo enkulu yokuqoshwa.
Okwesibili, kuzoqoshwa ngokuziphatha kwabaqaphi abanamakhamera ahlanganiswe nemizimba yabo. Futhi ngenxa yalokho, bazokhombisa ukuziphatha okuhle kubantu. Izokwehla isibalo sezehlakalo zodlame ngenombolo enkulu. Ngakho-ke, singabona ngokucacile ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba ayasebenza kakhulu.
Udlame lube yinkinga enkulu ezindaweni zokubuthana komphakathi. Kunjalo nangezinsiza zokunakekelwa kwempilo. Izigameko zodlame zingalimaza kakhulu ukukhululeka kwalesi sikhungo ngezinga elikhulu futhi kungaphazamisa nezinye iziguli nezisebenzi. Ngeke nje silindele ukuthi isibhedlela noma abasebenzi bezokuphepha bakhombise udlame emphakathini. Kepha futhi, ziningi izimo lapho udlame olwedlulele lubangelwe yiziguli okuholele ekutheni kube nenkinga esibhedlela futhi, nokuphazamiseka kweziguli. Kulokhu, sisebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba. Lawa makhamera asetshenziselwa ukuqapha indlela abasebenzi abasebenza ngayo ezigulini. Ngamakhamera anamathele emizimbeni yawo, abasebenzi bazozama konke okusemandleni abo ukukhombisa indlela emnene. Esimweni esifanayo, uma noma yisiphi isiguli noma isikhonzi sibonisa noma yiluphi udlame, abasebenzi bakhululekile ukubatshela ukuthi bayaqoshwa. Ngale ndlela, amakhamera agqokwa ngomzimba anganikeza usizo olukhulu lokulawula udlame ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo.
Ukuqapha Nokuqeqesha Udokotela:
Amakhamera agqokwa ngomzimba anokunye ukusetshenziswa okusebenzayo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo. Zisetshenziselwa ukuqapha amakhono odokotela abasebancane nabahlengikazi ngabadala babo. Abahlengikazi banikezwa izifundo ezikhethekile zomsebenzi wabo. Banomsebenzi wokunakekela iziguli zabo, babanikeze umuthi futhi banakekele nezidingo zabo. Basiza nodokotela ekuphatheni isiguli. Ukuziphatha kwabahlengikazi kubaluleke kakhulu. Sesixoxile ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba asetshenziselwa ukuqaphela indlela aziphatha ngayo. Kepha ngasikhathi sinye, singasetshenziswa ukubheka amakhono abo.
Kukhona odokotela abaphezulu oyedwa noma ababili esikhungweni esiholela eqenjini labodokotela abasebancane. Bangakwazi ukubhekisisa kalula abagadli babo futhi bangakhombisa amaphutha abo. Lokhu kubanikeza ithuba lokufundisa izingane zabo kalula.
Ingabe amakhamera agqokwa ngomzimba kufanele avunyelwe ezindaweni zokunakekelwa kwempilo?
Ubuchwepheshe bekhamera obugqokwa ngomzimba endaweni yokunakekelwa kwezempilo buyinkinga enkulu mayelana nokulindela ubumfihlo kweziguli nabavakashi. Ngokubona kwami, ukusetshenziswa kwalawa makhamera agqokwa umzimba kumele kube kuphela kubasebenzi bezokuphepha kanye namaphoyisa afika esikhungweni sasesibhedlela nganoma yisiphi isitatimende sofakazi noma ophenywayo. Kunezingxoxo ezithile zabahlukunyezwa kanye nofakazi ezivame ukwenziwa ngaphakathi kosizo lwezempilo ngabaphathi bezomthetho. Kungani sikhawulela ukusetshenziswa kwamakhamera emaphoyiseni nabasebenzi bezokuphepha? Ake sibheke isizathu esikhulu salokhu:
Ukonakala Okukhulu Kwamakhamera Omzimba Wokutholwa Ezimweni Zokunakekelwa Kwezempilo:
Amakhamera agqokwa ngomzimba anezinzuzo eziningi ngokusetshenziswa kwazo ezikhungweni zokunakekelwa kwempilo kepha ngasikhathi sinye, kunokungahambi kahle okukhulu okonakalisa konke okuhle okwenziwa yikhamera. Leyo nkingaImfihlo Yabaguli ”.
Isikhungo sezempilo sigcwele abantu isikhathi esiningi. Kulokhu, ziningi ezingafuni ukuthi ubumfihlo bazo buphazamiswe. Kepha inani elihloniphekile lamakhamera agqokwa ngumzimba awazivumeli ukuba zikwenze. Njengoba iningi lamalungu abasebenzi besebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba, kuba nzima kakhulu kubantu ukuthi bazisindise. Futhi asinawo umthetho othize nemithetho njengamanje esekela ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba ukuphazamisa ubumfihlo bomuntu. Okubaluleke kakhulu, kuneziguli eziningi, ezisesimweni esibi kakhulu. Abasebenzi abakwazi ukusebenzisa amakhamera ngezinjongo zokuqapha noma zokuziphatha uma lilimaza ubumfihlo bomuntu. Lokhu-ke sekuba uhlobo lomsebenzi ongekho emthethweni olimaza imiphumela yezikhungo zezempilo futhi kwenze ukuthi ababhekele neziguli bangajabuli okuyinto embi kabi. Ngakho-ke, kungani sidinga uhlobo olunje lwamagajethi olimaza uhlangothi olusetshenziselwa ukwedlula ukuthi alusiza? Le nto izoholela ekwehleni kwamakhamera agqokwa ngomzimba ezikhungweni zezempilo.
Ungayixazulula kanjani le nkinga?
Izikhungo zezempilo zanamuhla aziphileli okulindelwe yiziguli zazo. Lokhu kungenxa yokuthi ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kulimaza isikhungo sokunakekelwa kwempilo ngqo ngokuphazamisa ubumfihlo babalindi kanye neziguli. Singaqhamuka nendlela yokuxazulula le nkinga?
Okukhathaza kakhulu ubumfihlo lapha, obuphazanyiswa ukuqopha umuntu okukhamera ngenkathi angafuni ukuba kuwo. Kungaba nesisombululo. Inani lamakhamera agqokwa ngomzimba kufanele sehliswe ngezinga elikhulu. Uma kunikezwe lesi simo, abasebenzi akumele bavunyelwe ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba kuleso sikhungo. Kufanele uvunyelwe kuphela kubasebenzi bezokuphepha abasala ekungeneni kwesikhungo. Ngenxa yalokhu, inani elincane lamakhamera lingagwenywa elingasusa isici sokuphazamiseka kobumfihlo.
Futhi, kufanele kube neqembu lamalungu athile ezikhundla eziphezulu okufanele abe nesibopho sakho konke ukuqoshwa okwenziwe ngamakhamera. Kufanele bagcine okuqoshiwe ezandleni zabo futhi bazigcine ngasese. Ngale ndlela, ukuqoshwa kuzobe kuphephile futhi kuzokhulula izivakashi neziguli.
Kufanele futhi kube nemithetho ethile kanye nemithetho enikeza isixazululo esilinganayo kuzo zombili izinhlangothi okufanele uvumelane ngazo. Ngemuva kwalokho izinhlangothi zombili zizolalela umthetho. Izovula ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba esikhungweni ngokwezinga elithile futhi ngasikhathi sinye, ngeke kuphazamise ubumfihlo beziguli.
Izinzuzo ze-body-Worn Camera ezibhedlela igcine ukuguqulwa: I-December 4th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3588 Ukubuka kwe-5 Namuhla